‘ए, नारान्!’ | Shresthakedar's Blog
मे 2, 2012
साभार:- Mysansar, October 21st, 2011
‘NRN’ आज ‘सुपरहिट’ अर्थात् ‘अत्यन्तै तातो’ शब्द बन्न पुगेको छ। तर यसलाई भिन्न भिन्न अर्थमा लिइने गरिन्छ। कोही भन्छन्– ‘NRN’ भनेको Non Returning Nepali’ हो– जो बिदेशको ‘बर्गर’मा रमाउँछ, तर स्वदेशमा पनि ‘लड्डु’को अपेक्षा राख्दछ! कोही भन्छन्– No Reading Nepali’ नै ‘NRN’ हो– जो बिदेश जानासाथ नेपाली ‘बिर्सिएको’ अभिनय गर्दछन्! केहीलाई लाग्दो हो– Now, Rocking Nepal को ‘छोटकरी’ रुप ’’NRN’’ हो। र केहीलाई लाग्दो हो, ‘NRN’ को ‘लामकरी’ रुप Now, Returning Nepal हो!
तर, यी उडन्ते शब्दार्थसँग मेरो पटक्कै सहमती छैन। ’cause ‘NRNA’ को बिधान अनुसार, ’’NRN’’ भनेको Non Residential Nepali हो जो नेपाल बाहिर रहेर पनि ‘नेपाल र नेपाली’कै हितमा सोचि रहेको हुन्छ। र उ, कम्तिमा १८३ दिन नेपाल बाहिर बसेको हुनुपर्छ। यस बिधानलाई आधार मान्ने हो भने ‘एनआरएन’को प्राचिन इतिहासलाई पनि बिश्लेषण गर्नु जरुरी छ।
तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, एनआरएन अभियानको शुरुवात कहिले भयो? ऐतिहासिक रुपमा जनकपुत्री ‘सीताजी’लाई प्रथम महिला ‘NRN’ मान्न सकिन्छ। पहिलो पटक जनकपुरबाट भारत हुँदै श्रीलंका पुगेकी उनी थुप्रै महिना त्यहाँ बसिन्। कैदी भएर नै सही, १८३ दिनभन्दा बढि बिदेश बसोबास गर्ने उनलाई पहिलो ‘एनआरएन शहीद’ पनि मान्न सकिन्छ। किनकी, लंकाको शंकाकै आधारमा उनलाई ‘अग्नी परिक्षा’को नाममा ‘आत्महत्या’ गर्न बाध्य पारिएको थियो।
त्यसैगरी, कलाकार ‘अरनिको’ प्रथम ‘पुरुष एनआरएन’ हुन्। ‘कलाकारिता’ देखाउन भनेर चाइना गएका उनि, कहिल्यै नेपाल फर्किएनन्। यस अर्थमा अरनिको Never Returning Nepali हुन्, जसलाई हामी राष्ट्रको ‘विभुती’को रुपमा सम्मान गर्दछौं। चिनमा स्थायी बसोबास गर्न पुगेका अरनिको ‘राष्टि्रय बिभुती’ भएझैं बिभिन्न देशको ‘सिटिजनसीप’ लिएका थुप्रै नेपाली कलाकारलाई ‘अन्तराष्टि्य बिभूती’ घोषणा पनि गर्न सकिन्छ– यो मेरो नितान्त ब्यक्तिगत धारणा हो।
त्यसो त महात्मा गौतमबुद्धलाई पनि ‘मानार्थ एनआरएन’ मान्न सकिन्छ। नेपालमा जन्मिएर भारतहुँदै वर्मा, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड लगायत थुप्रै देशहरुमा समय बिताएकाले– उहाँमा एनआरएनको ‘ब्राण्ड एम्बेसडर’ बन्ने योग्यता पनि छ। तर, महात्मा बुद्धले यो प्रश्ताबलाई स्वीकार गर्ने संभावना ज्यादै न्यून छ, ’cause ‘नागरिकता’भन्दा माथी उठेर ‘मानवता’को प्रचार गर्ने महात्मालाई ‘डबल नागरिकता’को नारा स्वीकार गर्न निकै अप्ठ्यारो पर्दछ।
भृकुटी, सीता, अरनिकोजस्ता थुप्रै ‘प्राचिन एनआरएन’हरुलाई राष्ट्र्ले सम्मान गरको छ, गर्नै पर्छ। तर, केही कुराको बिश्लेषण हुनु जरुरी छ। राष्ट्र्कवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको शब्दमा ‘सीताले सारा भिजाईन, दक्षिण लंका भारत।’ उनले लंका, भारत भिजाएर हाम्रो देशको नामलाई ‘शितलता’ त दिइन् तर ‘राष्ट्र् बिकास’मा ‘उर्जा थप्ने काम कहाँ भयो? ‘भृकुटी तारा उदाइन् र उत्तर चीन तिब्बत।’ चिन र तिब्बतमा भृकुटीले माइतीको ‘नाम’ त चम्काईन्’ तर माइतीको ‘घर’ रङ्ग्याउन कहाँ पहल गरिन्? ‘बुद्धले यहीं पाएथे, ज्ञानको पहिलो मुहान।’ कुरा एकदम सही हो, तर त्यतिबेलाका सत्ताधारीले त्यो ‘बुद्धत्व’लाई स्वदेशमा टिक्न दिएनन्, बाध्य भएर बुद्धले बिदेश पलायन हुनु पर्यो!
यस ऐतिहासिकताका आधारमा, नेपालको नाम चम्काउन ‘एनआरएन’हरुको ठूलो योगदान छ। तर, ‘एनआरएन’हरुलाई ‘ए,नारान!’ मान्दै धुपबात्ती बाल्नु जरुरी छैन, ’cause उनीहरु गैर आवासीय भए पनि ‘नेपाली’ नै हुन्, ‘नारायण भगवान’ हैनन्। ‘नेपाली’ले नेपालको लागि केही गरेछन् भने ‘एनआरएन जिन्दाबाद’ भनौंला, गरेनछन् भने ‘गफै त रहेछ सम्धी’ भन्ने बुझौंला!
बुझ्नै पर्ने कुरो के हो भने, ‘कुरा’ले देशको ‘नाम’ चम्किएला, देशको ‘मुहार’ उज्यालो हुन सक्दैन। मुहार चम्काउन ‘काम’तिर लम्किनु पर्दछ। काम गर्ने भनेको त्यसैले हो– जो जहाँ बसे पनि मन र मष्तिष्कमा ‘नेपाल’ बोकिरहेको हुन्छ।
From → नेपाली साहित्य (Nepali Literary), हास्यव्यंङ्‌ग (Humour and Satire)
« तपाईँ कुन खालको ज्वाइँ?
मागी मागी छोराऽऽऽ बे »